Burburinta Maraakiibta Cruise-ka waa ganacsi weyn oo Turkiga ka jira
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Burburinta Maraakiibta Cruise-ka waa ganacsi weyn oo Turkiga ka jira
saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Ganacsigu wuxuu si xowli ah uga socdaa halka loo yaqaan 'Aliaga Shipyard' oo ku taal galbeedka Turkiga, halkaas oo shan markab oo dalxiis ah oo loo yaqaan 'hulking' loo kala qaadayo iibinta biraha duugga ah ka dib markii COVID-19 uu faafay dhammaantood laakiin uu baabi'iyay warshadaha dalxiiska.
Dib u warshadaynta Maraakiibta ee dalka Turkiga waxaa lagu sameeyaa aag warshadeed oo ay dawladdu leedahay isla markaana laga kireeyo shirkado gaar loo leeyahay. Dayryadu waxay ku yaalliin Aliaga, oo qiyaastii 50 km woqooyi ka xigta Izmir oo ku taal xeebta Aegean oo ah aag ay martigeliso koox weyn oo warshado culus ah.
Aagga dib-u-warshadaynta markabka waxaa markii ugu horreysay lagu aasaasay amar dowladeed 1976. Inta badan shaqaaluhu markii hore waxay ka yimaadeen Tokat iyo Sivas ee Bariga Turkiga waxayna degeen Caliaga. Dayrka dib-u-warshadaynta markabka Turkiga ayaa lagu dabaqaa waxa loogu yeero Habka degitaanka. Qaansada markabku waxay ku tiirsan tahay xeebta halka gadaal ay weli saran tahay. Baloogyada ayaa markaa wiishashka kor loogu qaadayaa iyada oo la marinayo aag shaqo oo biyo mareeno ah oo aan la mari karin. Dayrrada ayaan u adeegsan habka cuf isjiidadka, taas oo ah, daadinta baraagno biyaha ama xeebta.
Sannadkii 2002, Greenpeace waxay ka warbixisay xaalado liita oo xagga caafimaadka shaqaalaha iyo bay'adda ah deyrka ay markabku ka burburayaan ee Turkiga. Baarayaasha ayaa ogaadey in aan la helin ilaalin ku filan shaqaalaha isla markaana aysan jirin talaabooyin sax ah oo looga hortagayo wasakheynta deegaanka. Falcelinta canbaareynta caalamiga ah, Dowladda Turkiga waxay soo bandhigtay habab cusub oo lagu maareeyo qashinka halista ah. Sanadkii 2009, NGO-yada Shipbreaking Platform waxay la socotey warbixin cusub oo ku saabsan maaraynta qashinka dhulka hoostiisa. Waxay tilmaamtay horumar la taaban karo, in kasta oo walaacii weli la xiriiray qulqulka qashinka qaarkood sida daadinta biraha culus iyo PCBs.
Tan iyo markaas, dib-u-warshadeeyayaasha maraakiibta Turkiga iyo Dawladdu waxay sii wadeen inay horumariyaan ku-dhaqanka Caliaga, labadaba oo ku saabsan heerarka deegaanka iyo bulshada, oo ay ku jiraan ku-xirnaanshaha qaab-dhismeedka sharciyeed heshiisyada caalamiga ah ee deegaanka. Dayryadu waxay irdaha u fureen cilmi baarayaal madaxbanaan, la taliyayaal iyo khubaro. Intaa waxaa dheer, iskaashiga ay la leeyihiin dawladaha Yurub si loo kala furfuro maraakiibta badda ee waqtigiisu dhammaaday waxay sii caawisay hagaajinta dhaqanka. Dayrarka Turkiga ee horumarsan waxay ku biireen Ururka Caalamiga ah ee Dib-u-warshadeynta Maraakiibta (ISRA).
NGO-yada iyo kooxaha maxalliga ah ee u dooda xuquuqda shaqaalaha, oo ay ka mid yihiin bahwadaagta Platform-ka ee Istanbul Health and Safety Labour Watch (IHSLW), sidoo kale waxay weli ku sii jiraan sababo guud oo ka walaacsan heerka shilalka badan iyo wacyiga yar ee cudurrada shaqaalaynta ee daaraha Caliaga. Sida Koonfurta Aasiya, ururka midowga shaqaalaha ayaa wali ku itaal daran Aliaga. Saamaynta xun ee deegaanka ee habka soo degitaanka sidoo kale shaki kuma jiro inay ka sarreyso dib-u-warshadaynta aag si buuxda u xaddidan.
Faraha horumarsan ee Aliaga ayaa dalbaday inay ahaadaan kuwa soo socda Liiska EU-da ee xarumaha dib u warshadaynta markabka. Si loogu daro liistada EU-da, deyrarka waxaa hoos imanaya qiimeyn buuxda oo ku saabsan bay'addooda, caafimaadkooda iyo nabadgelyadooda, iyo waxqabadka bulshada, oo ay ku jiraan maareynta qashinka halista ah ee ka hooseeya. In 2018, laba yaard oo ku yaal Aliaga ayaa la ansixiyay oo lagu daray Liiska Midowga Yurub.
Cudurka weyn ee 'COVID-19' ee saaran maraakiibta dalxiiska ayaa burburiyey qayb wanaagsan oo ka mid ah warshaddan markii hore faa'iidada badan laheyd.
Bishii Maarso, mas'uuliyiinta Mareykanku waxay soo saareen amar aan dhoof lahayn oo loogu talagalay dhammaan maraakiibta dalxiiska ee ku sii jira meesha.
Jimcihii, daraasiin shaqaale ah ayaa darbiyada, daaqadaha, sagxadaha iyo xadiidka ka xayuubiyay dhowr markab oo ku jiray dekedda Caliaga, oo ah magaalo 45 km waqooyiga ka xigta Izmir oo ku taal xeebta galbeed ee Turkiga. Saddex markab oo dheeri ah ayaa lagu wadaa inay ku biiraan kuwa markii horaba la burburinayo.
Faafa ka hor, deyrarka markabku jabiyaan ee Turkiga sida caadiga ah waxay gacanta ku hayeen maraakiibta xamuulka iyo konteenarada.
Onal ayaa sheegtay in ilaa 2,500 oo qof ay ka shaqeeyeen ardaaga kooxo ku qaadanaya ilaa lix bilood in lagu kala furfuro markab rakaab oo buuxa. Maraakiibta ayaa ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Talyaaniga iyo Mareykanka.
Markabka ayaa looga golleeyahay in lagu kordhiyo mugga birta la burburiyay lana gaarsiiyo 1.1 milyan tan tan dhamaadka sanadka, laga bilaabo 700,000 tan tan Janaayo, ayuu yiri.
Xitaa qalabka maraakiibta ee aan biraha aheyn qashin ma aado maadaama howl wadeenada hoteellada ay ardaaga yimaadeen si ay u soo iibsadaan waxyaabo faa iido leh, ayuu raaciyay.